Google dia manambara fandaharana fizarana fidiram-bola $ 1B miaraka aminao! | Martech Zone
izany tsy marina, rohy moka.
Metacafe, rafitra fikarohana sy laharana ho an'ny horonantsary, fotsiny nihoatra ny $ 1,000,000 amin'ny vola azo zaraina amin'ireo mpamorona atiny. Mike dia nitatitra fa i Revver dia nahatratra ny $ 1,000,000 amin'ny vola zaraina amin'ity taona ity ihany koa.
Nanakiana aho Fanafihan'i Google an'ireo mpamatsy atiny iza no mangataka vola amin'ny fametrahana rohy. Michael Graywolf koa manana… izy koa maka tranokala lehibe miasa amin'ny asan'ny jaza mankany amin'ny Google Powers-That-Be.
Google dia nilaza fa manandrana mitazona ny valin'ny fikarohana voajanahary fotsiny izy tena organika. Na izany aza, ny faritra volondavenona amin'ny Terms of Service Google dia manjary manjavozavo. Farany teo, Matt Cutts mety nanolotra sosokevitra REHETRA amin'ny paositra tohana dia tsy maintsy asiana marika tsara ihany koa miaraka amin'ny tag nofollow - tsy ny mpamatsy rohy voaloa ihany.
Amin'ny maha iray amin'ireo 'mpamatsy atiny' ahy, dia mazàna mijery fomba hafa kely hafa aho. Tahaka ny niainan'ny Metacafe sy Revver fa tsy manana orinasa velona izy ireo raha tsy misy ireo mpamatsy vola mifandraika aminy, angamba tokony ho izany koa Google.
Raha matotra i Google amin'ny famongorana ireo rohy karama, dia tokony hizara ny vola miditra amin'ny atiny biolojika azony (amin'ny alàlan'ny fanondroana ireo rohy tohanan'izy ireo). Maninona raha aloanao ny habetsaky ny atiny lehibe avelako hanome an'i Google mpampiasa?
Tsy tompon'ny Internet i Google, ry havana. Ny atiny fa tsy an'ny Google. Izahay dia sahirana be mitady hisarika ny sain'i Google antsasak'adiny ka manadino izany isika. Google dia nanao asa lehibe tamin'ny fametrahana ny tenany ho 'ambonin'ny' olon-kafa amin'ny Internet.
Angamba efa tonga ny Search Engine vaovao miaraka amina maodely vaovao?
Tags: demografika diggfamaritana dmarcdofollowphishing mailakademografika facebookgoogle miampy demografikademografika mifandraydemografika pinterestdemografika redditrel = ahySliderfomba fanao tsara indrindra amin'ny media sosialyhaino aman-jery sosialy demografika infographicdemografika amin'ny haino aman-jery sosialy
PageRank: Natao ny teôria Gravitational an'ny Newton
WordPress: Fikarohana Post mifandraika
Dec 30, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Tsy mbola naheno momba ny metacafe aho talohan'ny nanatontosako programa afiliana henoko momba ny fandaharam-bola mizara revver fa tamin'ity volana ity dia nahazo vola $ 40 aho, izay mihoatra ny nataoko tao amin'ny Google adsense go figure. Mino aho fa tokony nizara atiny google ho an'ny valin'ny organika ary mino koa izy ireo fa tokony hanana vola amin'ny youtube ho an'ny besinimaro fa tsy partipants vitsivitsy voafantina
Dec 30, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Namaky lahatsoratra ratsy be dia be aho rehefa mitaraina ny olona momba ny politikam-pifandraisana Google sy ny laharam-pahamehana. '
Ity lahatsoratra ity ihany no manazava zavatra betsaka mitondra ny tena zava-misy.
Avy eo anilako te-hanohana izay lazainao rehetra aho.
Dec 30, 2007 ao amin'ny 4: PM PM
Na ny Google na ny Yahoo momba an'io raharaha io dia samy nametraka fitsipika mifehy an'ireo mpampiasa izay mahazo tombony amin'ny Google sy Yahoo ihany fa tsy ny vondron'ireo mpampiasa. Mazava ho azy fa marina ianao… ny Internet sy ny atiny napetrak'ireo mpampiasa azy dia an'ny mpampiasa fa tsy an'ny lahatahiry sy ny motera fikarohana. Ny fanamby dia ny mahazatra, ny lafiny fitadiavam-bola no mitarika ny rafitra ary raha mbola misy ireo manararaotra mahazo tombony haingana, dia hanana ny tampony izy ireo raha tsy hoe ny governemanta… io teny ratsy io… .
Misaotra tamin'ny fitenenana.
Dec 30, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Mody miangona ireo goaika! Heh!
Izaho dia efa mitandrema amin'ny Google mandritra ny fotoana fohy!
Ary koa, tena misy ifandraisany eto: ny boky tiako indrindra (mandrakizay?) “Fitsipika vaovao momba ny toekarena vaovao”Avy amin'i Kevin Kelley dia miresaka momba ny fomba ahazoan'ny" superwinners "tombony amin'ny tontolon'ny" mpandresy indrindra "ny toekarena tambajotra ao amin'ny Toko 2 izay azonao vakiana amin'ny Internet. Izy io (sy ny boky iray manontolo) dia azo vakiana tsara. Oh, BTW, efa nosoratana talohan'ny nisian'ny Google akory (na farafaharatsiny talohan'ny nahalalan'izy ireo tsara.)
Dec 2, 2011 amin'ny 2: 57 AM
Angamba efa tonga ny Search Engine vaovao miaraka amina maodely vaovao? Matetika isika no manadino ny fomba vaovao sy ny toetr'andro misosa ny Internet. Tadidiko fa nitomany aho tamin'ny andro nanidiana ny fikarohany ampahibemaso ny Northern Light… ary izany dia tamin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa IHANY. Azo atao ny zava-drehetra ary amin'ity tranga ity dia misy fanantenana, saingy heveriko fa ao amin'ny sokajy "lehibe loatra ka tsy hahomby" i Google… satria araka ny voalazanao… izy ireo no mpitondra satria "toy izany no itondran'ny mpanjifa azy ireo… ary manery mafy izy ireo. Mitovy amin'ny eritreritry ny fiaraha-monina hatrizay - “ah avelao fotsiny izy ary avelao aho“ hahazo ny ahy ”.. satria tsy misy azonao atao amin'izany.” Mampalahelo be. Misaotra tamin'ny lahatsoratra.
Dec 2, 2011 amin'ny 2: 59 AM